Yangon Amata Smart and Eco City Project Kicks Off | Myanmar Business Today
HomeBusinessYangon Amata Smart and Eco City Project Kicks Off
Yangon Amata Smart and Eco City, expected to create over 33,000 jobs for local people, has kicked off the construction process with the official groundbreaking ceremony on December 27.
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၃၃,၀၀၀ ကျော် ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန်းပန္နက်တင် ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Amata Smart and Eco Cityသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင် ရွက် နေသည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြ နှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်Amata Asia (Myanmar) Limited က ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြင့် တည်ဆောက် နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)နှင့် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန်ကျေးရွာအနီးရှိ မြေဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကပေါ်တွင် စက်မှုဇုန် တည်ဆောက် မည်ဖြစ်ပြီး လူနေအိမ်များ ရုံးခန်းများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်းစတင်ရန် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြ နှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်Amata Asia (Myanmar) Limited တို့ လုပ်ငန်းဖက်စပ် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း ပြီးဆုံးပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း (၃၃၀၀၀)အထိ ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နှစ်စဉ် အခွန်အခ များလည်း တိုးပွားရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ထို့အပြင် စက်မှု ဇုန်အတွင်းသို့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်း ဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ စက်မှုကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံခြား ပို့ကုန်ကဏ္ဍ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး လူမှု၊ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကြီးမားသော အထောက ်အပံ့များ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော် က ပြောကြားထားသည်။
Amata Smart and Eco City သည်စီမံကိန်း ရေရှည်တည်တံ့မှု ရှိစေရန်အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် အခြေခံပြီးသင့်လျော်သည့် မြို့ပြ ဒီဇိုင်းတို့ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
Wound swabs. buy cialis No specic colposcopic appearances, unlike cin.
Previous articleYangon American International School: Preparing students for an unpredictable tomorrow, today
Next articleShan Avocado Company Wins Entrepreneur Award